विश्व विद्यालय / परिक्षाफल Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - त्रिविबाट ट्रान्सक्रिप्ट लिन यसरी आँशु झार्नुपर्छ !
त्रिविबाट ट्रान्सक्रिप्ट लिन यसरी आँशु झार्नुपर्छ !
टीयूका कर्मचारीले मान्छे गन्दैनन् काठमाडौँ । कोठा नम्बर १८ को झ्याल नजिकै आँसु पुछिरहेकी थिइन् विनिता बस्नेत। ट्रान्सक्रिप्ट माग्दा उल्टै झपारेपछि उनको चित्त दुख्यो। आँसु बग्यो कार्यालय परिसरभित्रै। कर्मचारी रिसाउँदै भन्दै थिए, ‘किन बारम्बर आइरहनुहुन्छ ? यहाँ कराएर मात्रै हुन्छ ?’ आफूभन्दा एक हप्तापछि बुझाएको साथीले ट्रान्सक्रिप्ट पाए। तर उनले पाइनन्। उनी धेरै बेर आँसु झार्दै झ्यालछेउमै उभिरहिन्। कर्मचारी फेरि झर्कंदै भने, ‘जानुस्, डिन कार्यालयमा गएर भन्नुस्।’ झ्याल नजिकै बसेर आफ्नो पीडा साथीहरूलाई सुनाउन थालिन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयकोे आज अनुगमन गरेको छ । पुस्तकालयका राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजको अभिलेखबारे अध्ययन गर्न अनुगमन गरिएको समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताए । अनुगमनका क्रममा पुस्तकालयका पुस्तकको संरक्षण हुन नसकेको पाइएको उनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. मल्ल बर्खास्त
सुर्खेती शिक्षा प्रेमी 'शक्ड' काठमाडौँ । कांग्रेस भएकै कारण मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ललाई बर्खास्त गरेको छ । विश्वविद्यालय सिनेटको बिहीबार बसेको बैठकले मल्ललाई विनाकारण बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबारेमा सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध भइरहेको छ । उनको ठाउँमा यामबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । मल्ल कांग्रेस निकट हुँदा कार्की भने नेकपाका निकट व्यक्ति हुन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य विभागमा सह–प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत कार्की काजमा शिक्षाशास्त्र संकायमा डिन थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । सम्बन्धनको विषयलाई लिएर त्रिभुवन श्वविद्यालयको पदाधिकारी कक्षमा ताला लगाइएको छ । कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र योजना निर्देशनालयका प्रमुख कार्यकक्षमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ निकटका विद्यार्थीले ताला लगाएका हुन् । ब्याचलर अफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बिसिए) लगायत केही विषयमा सम्बन्धन दिँदा मापदण्ड नपु¥याई आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा ताला लगाउनुपरेको सङ्घका त्रिवी एकाइका जगदिश भट्टले जानकारी दिए ।उनीहरुले यही मङ्सिर १६ गते ताला लगाएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन थालेपछि पुनः विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । केही वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमि आएको त्रिविमा भर्ना दर फेरि बढेको हो । त्रिविमा अहिले विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकि सङ्कायमा नयाँ प्राविधिक विषयको पठनपाठन हुन थालेपछि भर्ना दर बढेको त्रिविका योजना निर्देशनालयका प्रमुख प्रा . डा ऋदिशकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । त्रिविमा शैक्षिक सत्र २०६९÷७० देखि लगातार तीन शैक्षिक सत्रसम्म विद्यार्थी भर्ना घटेकोमा त्यसपछि भने बढेको पाइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक क्रमाङ्कन नम्बर’ 'आइएसविएन' लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा आउनु नपर्ने भएको छ । पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले अनलाइनबाट नै फारम भरी नम्बर लिन सकिने भएपछि अब काठमाडौँ आउनु नपर्ने भएको बताए । यसअघि लेखकले आइएसविएन नम्बर लिन केन्द्रीय पुस्तकालय आउनुपर्ने थियो । अनलाइनबाट फारम भरेपछि आइएसविएन प्राप्त गर्नका लागि लाग्ने शुल्क बंैकबाट पठाउनुपर्नेछ । सन् २००० बाट त्रिवि पुस्तकालयले बेलायतको आइएसविएनको प्रतिनिधिका रुपमा नेपालका प्रकाशित पुस्तकलाई आइएसविएन प्रदान गर्ने गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
किन रोक्का भयो कृषि र वनका निजी क्याम्पसको भर्ना ?
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थी आन्दोलित बनेपछि निजीका लागि भर्ना प्रक्रिया रोक्का गरिएको छ ।विश्वविद्यालयले डिनको कार्यालयलाई हालका लागि निजी सम्बन्धनको भर्ना प्रक्रिया रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो । विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायका डिन जयप्रकाश दत्तका अनुसार मङ्गलबार बसेको भर्ना समितिले विश्वविद्यालयको निर्देशनअनुसार भर्नाको सूचना संशोधन गरी हाललाई निजी सम्बन्धनको भर्ना प्रक्रिया रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको बताए। यससँगै वन सङ्कायको पनि निजीको भर्ना प्रक्रिया रोक्का हुने बताइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षासम्बन्धी सूचना टेलिफोनबाटै उपलब्ध हुने भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको सुविधालाई ध्यानमा राखी सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले सो सेवा उपलब्ध गराइएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षासँग सम्बन्धित विविध जानकारी कार्यालय समयभित्र त्रिविले उपलब्ध गराएको टेलिफोन नम्बर ४६७२६३२ र ४२८४१६७ बाट विद्यार्थीले जानकारी लिन सक्नेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षलाई कार्यकक्षमा बन्धक बनाएको भन्दै प्रहरीले त्यहाँ अध्यनरत नौ विद्यार्थीलाई शुक्रबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरका अनुसार रजिष्ट्रार मनराज कोलाक्षपति र सेवा आयोगको अध्यक्ष रामनाथ ओझालाई कार्यालयमै बन्दक बनाएकाले साँझ विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए । उनीहरुले दिनभर धर्ना बसेर पदाधिकारीका गाडीसमेत चलाउन नदिएका कारण प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गर्नुपरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि त्रिविका प्राध्यापक सरकारी तलब खाने, निजीमा पढाउनेत्रिविका प्राध्यापक सरकारी तलब खाने, निजीमा पढाउने कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्